Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf kaafamuufi Dhaabbata Bulchiinsa Gamoowwanii qorate.
Raawwii Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii ilaalchisee, hirmaannaa ummanni maallaqa callaan, humnaafi meeshaan taasiseen hojiin bu’uuraalee adda addaa hojjetamaa ture, qulqullina magaalaa irratti, hojii qonna magaalaa, ijaarsa piroojeektota buleeyyiifi galii mana qopheessaan walqabatee hojiiwwan hanga kurmaana kanaatti sektarichaan raawwataman akka ciminaatti ilaalamaniiru.
Ijaarsi seeraan alaa magaalaafi baadiyyaa gidduutti akkasumas, magaalota keessatti karaa guutuu ta’een hoogganamuu dhabuufi rakkoon kun bu’uura irra hiikkachuu dhabuun, ijaarsi piroojeektota buleeyyii kan akka ‘media complex’ harkifachuun, piroojeektota bu’uuraalee misoomaa magaalota UIIDPfi UIFn bulan raawwiin isaanii gadaanaa ta’uu korichi hanqina ta’uu gamaaggame.
Safaraafi galmeessi kaadistara lafa baadiyyaa Godinaalee 17, Aanaalee 54fi Gandoota 558 keessatti maasiin parsilii 712,271 (%78) raawwatamuun, qabiyyee durii seera qabeessa taasisuuf jalqabbiin jiru, walharkaa fuudhiinsa daangaa magaalaafi baadiyyaa, qoodiinasa lafa jallisii fayyadamummaa dargaggoofi shamarranii mirkaneessuuf hojiin hojjetame gaarii ta’uun ibsame.
Gama biraan, hordoffii lafa invastimantii, IMXfi oomisha albuudaa waliigalaan lafa heek. 15,958.2 (47) qofa raawwachuun, waraqaa raga karooraa haaraafi buleeyyii walitti 982,364 karoorfame keessaa 77, 534 (7.9%) raawwii gadaanaa ta’uu ibsuun hanqina ta’uu gamaaggameera.
Pooteenshaala magaalaafi baadiyyaa adda baasuun carraan hojii uumame, bakka oomishaafi gurgurtaa adda baasuufi walitti hidhamiinsa gabaa uumuu, industirii maanufaakchariingii babal’isuufi deeggarsa kennuuf hojiin hojjetamaa ture cimina jedhame. Gama biraan, carraa hojii ebbifamtoota Digriifi BLTOfi rakkoo dhaqqabamiinsa wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokkoo furuuf hojiin hojjetame hanqina jedheera.
Gabaa tasgabbeessuuf tarkaanfileen adda addaa fudhataman keessattuu, meeshaalee ijaarsaa irratti sirreeffamni gatii taasifamuufi hordoffii taasifamaan tureen hojiin bu’a qabeessa ta’e hojjetameera. Haa ta’umalee, dhiyeessii isaan walqabatee rakkoon kan jiru ta’uufi xiyyeeffannoo kan barbaadu ta’uu ibsaniiru.
Walumaagalatti, raawwii hojii manneen hojii hafanis bifuma walfakkaatuun kan gamaaggame korichi, hojiiwwan akka hanqinaatti sektaroota hunda keessatti mul’atan adda baasuun karoora kurmaana itti aanuu keessatti xiyyeeffannoo addaan irratti hojjatamuu akka qabu Dura Teessuu I/Aantuun Korichaa Aadde Alfiyaa Abdurrahmaan ibsaniiru.
Toorbee kana 9248
Ji'a kana 53480
2008 irraa eggalee 4723472